हाम्रो संस्कारले नै प्रश्न नगर्ने बनायो : नारायण वाग्ले – Vision Khabar
। २१ असार २०७४, बुधबार ०३:०० मा प्रकाशित
४७ सालपछिको सामाजिक प्रवृत्ति हेर्नुभयो भने ००७ सालको ठ्याक्कै विपरीत हो । समाजको ‘भ्यालु सिस्टम’नै त्यो होइन । मलाई लाग्छ त्यहाँबाट अर्को खाले ‘भ्यालु सिस्टम’को विकास भयो । यो ‘भ्यालु सिस्टम’ले हाम्रा सर्तहरू, स्वार्थहरूको ढोका खोलिदियो । त्यहाँदेखि ‘म’ व्यतिगत लोभ, लालच, लिप्सा, इष्र्यामा डुबेँ र ‘म’ नै संयोगले मिडियामा गएँ भने के हुन्छ ? भन्नुको अर्थ सबैले गर्ने त्यही हो, जुन आज १० हजारले गरिरहेका छन् ।
लोभले त्यहीँबाट घर बनाउन सुरु गर्यो । ००७ सालतिरको पुस्ता हेर्दा, त्यसबेलाका अन्तरवार्ता, कुराकानीहरू पढ्दा त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै त्याग, योगदान र सेवाभाव थियो भन्ने देखिन्छ । तर ०४७ सालपछिको सामाजिक प्रवृत्ति हेर्नुभयो भने ००७ सालको ठ्याक्कै विपरीत हो । समाजको ‘भ्यालु सिस्टम’नै त्यो होइन । मलाई लाग्छ त्यहाँबाट अर्को खाले ‘भ्यालु सिस्टम’को विकास भयो । यो ‘भ्यालु सिस्टम’ले हाम्रा सर्तहरू, स्वार्थहरूको ढोका खोलिदियो । त्यहाँदेखि ‘म’ व्यतिगत लोभ, लालच, लिप्सा, इष्र्यामा डुबेँ र ‘म’ नै संयोगले मिडियामा गएँ भने के हुन्छ ? भन्नुको अर्थ सबैले गर्ने त्यही हो, जुन आज १० हजारले गरिरहेका छन् । आज लिप्सामा निर्लिप्त मान्छे पत्रकारिता गरिरहेको छ ।